BUDDHIST TERMS' Dictionary: DISCIPLES’ CONVENTION - သာဝကသန္နိပါတ
DISCIPLES’ CONVENTION - သာဝကသန္နိပါတ
DISCIPLES’ CONVENTION Sᾱvakasannipᾱta
သာဝကသန္နိပါတ - တပည့်သားသံဃာများ ထူးခြားစွာ စုံညီစုစည်းမိသော အစည်းအဝေး။
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တွင် လက်ဝဲတော်ရံ အဂ္ဂသာဝက၊ လက်ယာတော်ရံ အဂ္ဂသာဝကအဖြစ် အပ်နှင်းသည့် သံဃာ့ အစည်းအဝေးပွဲကြီး တစ်ကြိမ်၊ ရာဇဂြိုလ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
During the lifetime of the Buddha,adisciples’ convention took places at the Jetavana monastery in R¬ᾱjagaha for conferring the title of Chief Disciple on the Ven. Sᾱriputta and the Ven. Mahᾱmoggallᾱna.